Madaxweyne Deni oo cadeeyay Mowqifkiisa ku aadan Wadahadalada DF iyo Somaliland | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxweyne Deni oo cadeeyay Mowqifkiisa ku aadan Wadahadalada DF iyo Somaliland
Madaxweyne Deni oo cadeeyay Mowqifkiisa ku aadan Wadahadalada DF iyo Somaliland
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo khudbad ka jeediyay furitaanka Kalfadhiga 46-aad ee Baarlamanka Puntland ayaa ka hadlay aragtida maamulkiisa ee shirka dowlada federaalka iyo maamulka Somaliland uga furmay Jabuuti.
Waxa uu sheegay Madaxweyne Deni in Puntland shirkaasi wax shqo ah ku laheyn, waxa uuna cadeeyay in maamulkiisa uusan aqbali doonin natiio kasta oo kasoo baxda shirkaasi ka furmay dalka Jabuuti.
“Waxaan cadaynaynaa inaan marna ogolaan doonin natiija ka soo baxda wadahadal kasta oo lala galo Somaliland oo aysan Puntland qayb ka ahayn. Puntland waxaa Somaliland kala dhexeeyo khilaaf dhuleed taas oo u baahan inaan xal ka gaarno” Ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Maamulka Puntland ayaa marar badan codsaday in ay qeyb ka noqoto wadahadalada Dowlada federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland, hasa ahaatee dowlada federaalka ayaa dhagaha ka fureesatay dalabka Puntland.
Madaxweyne Deni oo cadeeyay Mowqifkiisa ku aadan Wadahadalada DF iyo Somaliland was last modified: June 16th, 2020 by Admin
Kadib Imaaraadka, Bahrain iyo Oman ayey u badan tahay in ay noqdaan wadamada ku xiga ee ‘xiriirka la yeelanaya’ Israel